Mifananidzo yeGoogle inowedzera mashandiro ebasa rayo | TeraNews.net
Munyori Nikitin Eugenius Yakabudiswa pa 10.09.2021
Google iri kuramba ichivandudza masevhisi ayo uye hunyanzvi hwakakanganisa Google Mifananidzo hwaive hwekuda kwevashandisi. Kuchengeta gigabytes remifananidzo mumakore kwakanaka, asi kwenguva pfupi. Kubva gore kusvika gore, varidzi vanobvisa iwo mafoto kuitira kuti vawedzere nzvimbo kana kungoisa ndangariro mukukanganwa. Naizvozvo, kurudziro yekambani - yekumutsa yakajeka mifananidzo yakajeka mupepa fomu, rave zano rinonakidza uye rakatsvaga. Chokwadi, sevhisi inowanikwa kusvika zvino muUSA neCanada chete. Asi munguva pfupi iri kutevera izvi zvinokanganisa nyika dzese dzenyika.
Google Mifananidzo - purinda mapikicha uye ugozvitumira kumuridzi
Hapana chikonzero chekutambisa nguva uchitsvaga makambani ekuchinjisa emhando mafoto kupepa. Google ichatiitira zvese izvi. Kunyangwe iyo mari, asi mhando yacho ichave yakanyanyisa kukwirira. Vashandisi vanopihwa kuti vatore kudhinda pane chero mhando yepasi - bepa, kanivhasi, machira, zvichingodaro. Gloss kana matte pamusoro, dhizaini kurapwa, saizi - unogona kusarudza chero paramende. Uye chikamu chakanakisa ndechekuti seti yacho inouya neakakumikidzwa foto album mune yakapfava kana yakaoma kupakata.
Zvinogona kuita kunge zvisinganzwisisike kune vamwe, asi zvinoenderana nehuwandu, vanopfuura makumi mapfumbamwe muzana evashandisi vakareba (anopfuura makore makumi maviri) vakamira kudhinda mifananidzo pabepa. Nguva iyoyo hapana chishuwo. Kunyangwe makambani ekudhinda haawanike mumaguta ese - vakaenda vakaputsa nekuda kwekushaiwa kwekuda. Wadii kushandisa seinoshanda sevhisi iyo inobatsira vanhu vezera ripi zvaro kuchengetedza ndangariro dzavo zvachose.
Iyo Mifananidzo yeGoogle inopa inonakidza kwazvo uye ichawana zvirokwazvo rutsigiro pakati pevateveri vekutora mifananidzo isingakanganwike. Izvo zvakakosha kutevedzera yekambani mirawo maererano nemhando yemifananidzo yedhijitari ivo pachavo (resolution). Mushure mezvose, kana uchichinjisa mufananidzo kuenda kubepa, mhando yakakodzera inodiwa. Google yekunyepedzera njere inogona kugadzirisa mapikicha, asi zvirinani kana iyo yekutanga faira inosangana neese akataurwa maficha.
X2 mini kamera yevana haisi kamera yemwana zvachose
Ndeipi TV iri nani kutenga - 4K kana FullHD
Garmin Venu 2 Plus - chitsva mumusika we smartwatch
Tesla Bot marobhoti - nyowani nyowani yaElon Musk
DAC Topping E30 - wongororo, tsanangudzo, maitiro
LG DualUp - Monitor ine 16:18 chimiro
Yakasimba uye yakashongedzwa bhegi revana vechikoro
Vanhu vanokwanisa kuona zviratidzo zvekutanga zvechirwere
REMOTE G21 PRO: pamusoro, yakatarwa
Kuparadzanisa system: mhando dzemhepo inonamira, sei kusarudza